Talooyin Archives - CasinoAdvisor.eu
Sic Bo, oo sidoo kale loo yaqaan lammaane laadhuu, waa ciyaar qadiim ah oo Shiine ah oo caan ka ah Aasiyaanka. Waa mid ka mid ah kulamada ugu caansan Macau, halka, Dunida Galbeedka laga helo casinos-ka Atlantic City. Ciyaarta waxaa lagu ciyaaraa seddex laadhuu oo aad uga duwan yahay ciyaaraha kale ee casino. Gabi ahaanba waa… Continue reading Tilmaamaha Sic Bo ee bilowga ah
Kala sooc sida Talooyin
Tilmaamaha Bingo ee bilowga ah
Haddii aadan waligaa ciyaarin wax ciyaar ah khadka tooska ah ee internetka oo aadan hubin meesha aad ka bilaabi lahayd, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Bingo-ka khadka tooska ah wuxuu noqday mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan xilliyadan dambe laakiin wuxuu fidiyaa xididdadiisa qarnigii 16-aad. Dadku waxay aadi lahaayeen hoolalka bingo si ay to Continue reading Tilmaamaha Bingo ee bilowga ah
Tilmaamaha Kaarka xoqida ee tooska ah ee bilowga ah
Kaararka xoqida ayaa caan ku noqday waayihii la soo dhaafay taas oo ku sasabtay dad badan inay isku dayaan nasiibkooda. Ka warran haddii aad ku samayn karto khadka tooska ah? Hagaag, kaararka xoqida ee internetka waa hab fudud oo xiiso leh oo lagu kasbado abaalmarino aad u tiro badan adoo fadhiya gurigaaga. Kaarka xoqida ee internetka waa mid cusub oo cusub ... Continue reading Tilmaamaha Kaarka xoqida ee tooska ah ee bilowga ah
Talooyinka Video Poker ee bilowga ah
Video Poker waa ciyaar kaararka shan-kaar ah, oo sidoo kale loo yaqaan turub-khaldan oo go'an, oo lagu ciyaaro casinos-ka internetka. Waxay xoogaa la mid tahay mashiinnada ciyaarta. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya fiidiyowga fiidiyowga iyo turubku waa inaad lahaato xirfad aad ku ciyaarto, halka, boosaska gebi ahaanba ay kuxiran yihiin koronto-dhaliye lambar. Hadaad tahay bilow in Continue reading Talooyinka Video Poker ee bilowga ah
Tilmaamaha Roulette ee bilowga ah
In badan oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa inaad aragteen dad si aad ah ugu labisan filimada, oo tagaya casinos, isla markaana ku khamaaraya Roulette. Intiinna badankiina waxaa laga yaabaa inaydaan fahmin qaabka ciyaarta oo aad inbadan ka fekeraysay kulankaan. Hagaag, kulankaan wuxuu gebi ahaanba ku saabsan yahay nasiib laakiin macnaheedu maahan inaad you Continue reading Tilmaamaha Roulette ee bilowga ah
Tilmaamaha khadka tooska ah ee bilowga ah
Boosaska Online waa kulan casino ugu caansan dunida oo dhan. Ciyaarahaani waxay bixiyaan waayo-aragnimo ciyaar xiiso leh, oo leh heeso dhawaaq ah, mowduucyo soo jiidasho leh, iyo sawiro heer sare ah. Booska internetka ayaa caan ku ah jaakbotyada waaweyn iyo gunooyinka bilowga ah, taas oo adkeyneysa in la iska caabiyo. Waxaad ku ciyaari kartaa ciyaar hal-hal ah mashiinka, tani waxay ku siin doontaa fursad… Continue reading Tilmaamaha khadka tooska ah ee bilowga ah
Tilmaamaha Craps ee bilowga ah
Haddii aad ku cusub tahay khamaarka internetka oo aadan waxba ka ogayn wax ku saabsan ciyaaraha khadka tooska ah lagu ciyaaro, markaa craps waa ciyaarta ugu fiican ee lagu bilaabi karo. Waxay caan ku tahay ciyaartoyda layliska maxaa yeelay waa ciyaarta ugu fudud ee wax lagu barto. Ciyaarta ayaa caan ku ah lacag bixinno qurxoon iyo ciyaar wanaag saaxiibtinimo, ciyaarta waxaa jecel xirfadlayaasha sidoo kale, khibrad la’aan… Continue reading Tilmaamaha Craps ee bilowga ah
Tilmaamaha Blackjack ee bilowga ah
Blackjack waa ciyaar kaar ah, oo lagu ciyaarayo ganacsadaha ku jira casinos. Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonnaa talooyin ku saabsan bilowga ah inuu ku ciyaaro blackjack. Haddii aad ku cusub tahay blackjack ama aad horay u soo ciyaartay, talooyinkani waxay kaa caawin karaan inaad si fiican u fahamto oo kuu oggolaato inaad ku guuleysato safarkaaga xiga ee… Continue reading Tilmaamaha Blackjack ee bilowga ah
Baccarat / Punto Banco talooyin
Haddii aad ahaan jirtay taageere James Bond oo aad si dhow ugu fiirsan jirtay filimadiisa, waxaa laga yaabaa inaad dareentay in baccarat uu yahay ciyaartiisa xulashada casinos. Waa ciyaar kaararka caanka ah, oo ka duwan ciyaaraha dhaqanka sida blackjack. Waxaa badanaa la ciyaaraa inta udhaxeysa ciyaaryahan iyo bangi; Farqiga u dhexeeya… Continue reading Baccarat / Punto Banco talooyin
Tilmaamaha Casino Online ee bilowga ah
Waxaad kuheli kartaa khibrad layaableh ee khamaarka khadka tooska ah ee internetka, adoo fadhiya gurigaaga ama meelkasta oo kale, adoo adeegsanaya qalab kasta. Waxaa jira boqolaal boggag internet ah, oo leh kumanaan ciyaarood oo bixiya khibradda ugu dambeysa ee khamaarka. Markaad tixgelinayso casinos badan, casino kastaa wuxuu leeyahay sharciyo u gaar ah, nidaamyo lacag bixin ah, gunno, iyo ciyaaro sidoo kale. Continue reading Tilmaamaha Casino Online ee bilowga ah
Bogga ugu weyn » Talooyin